ဖက်ရှင် – The Padaythar
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် ရုပ်ရှင် သတင်း အနုပညာ ခေတ်ရေစီး နိုင်ငံတကာ
၇၆ ကြိမ်မြောက် ရုပ်ရှင်ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲ ၂၀၁၉ ဆန်ခါတင်နှင့် ဆုရရှိသူများစာရင်း
[Zawgyi] အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု – ဒရာမာဇာတ်လမ်း ဆန်ခါတင် ဇာတ်ကားများ ဆုရရှိ ဇာတ်ကား Bohemian Rhapsody အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု – ဂီတဆိုင်ရာ (သို့) ဟာသ ဇာတ်လမ်း ဆန်ခါတင် ဇာတ်ကားများ ဆုရရှိ
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် အနုပညာ ခေတ်ရေစီး
ရွှေကမ္ဘာလုံးဆုပေးပွဲမှ အခန့်ညားဆုံး အမျိုးသားဖက်ရှင်များ
[Zawgyi] ဂျိုး အယ်လ်ဝင် ခရစ္စတီယန် ဘေးလ် ရစ်ချတ် မဒ္ဒန် နစ်ကိုးလက်စ် ဟော့လ်တ် အက်ဗင်န် ပီတာ မာရီယို လိုပက်ဇ် ရစ်ချတ် ဂီးယာ တယ်ရီ ခရူးစ် လုခ်
ဆယ်လီ ဖက်ရှင် အလှအပ ခေတ်ရေစီး
(၅)လအတွင်း ပေါင်(၃၀၀)ကနေ (၁၅၉)ပေါင်အထိ ၀ိတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆန်းလင်းထွန်း
January 3, 2019 by padaythar
[Zawgyi] အရမ်းဝနေလို့ စိတ်ညစ်နေပါပြီ။ဒီတစ်သက်ဝိတ်ကျပါအုံးမလား ဆိုပြီး စိတ်ပျက်အားလျော့နေပြီလား..? ဘယ်လောက်ပဲ ၀၀ တကယ်ပဲ ၀ိတ်ကျချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြရှိမယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတာ ပါ။(၂၀၁၉)မှာ ၀ိတ်ကျချင်ပါပြီဆိုတဲ့ သူတွေ အားကျအတုယူသင့်တဲ့ ဆန်းလင်းထွန်းရဲ့ အကြောင်း ကို ဖော်ပြ ပေးချင်ပါတယ်။ ဆန်းလင်းထွန်း ကတော့
လက်ခံထားတဲ့ ပွဲတိုင်းကို Sexy ဖက်ရှင်တွေပဲ ဝတ်ဖြစ်မယ့် သင်ဇာဝင့်ကျော်
သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် / ယုဖြူဟန် / ဧရာဝတီ [Zawgyi] ယခုတလောမှာ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာသာမက အပြင်လောကမှာပါ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ခံနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ သူမကို ပရိသတ်များက ဆယ်စုနှစ် တစုကြာ တသမတ်တည်းပဲ မြင်ရတာကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ
ဓလေ့ရိုးရာ ဖက်ရှင် အလှအပ ခေတ်ရေစီး
[Zawgyi] အင်စတာဂရမ်မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ မျက်ခုံးရှိတ်ခွဲတဲ့ဖက်ရှင်တွေဟာ ဟိုးအရင်ကတည်းက Hip – Hop သမားတွေကြားမှာ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ သူတို့ရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ Hip-Hop ဆိုတာ Cut လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတာသင်သိပါသလား? ၉၀ ခုနှစ်များကတည်းက ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်း ယနေ့ခေတ် လူငယ် အများအပြားကြားမှာ ပြန်လည်ရေပန်းစားလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေး ဖက်ရှင် ဗဟုသုတ ပြပွဲ ခေတ်ရေစီး
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ ပန်းရောင်ခြယ်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ
[Zawgyi] အများနဲ့မတူတဲ့ ဆံနွယ်​ရှည်​ကြီး​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတဲ့ ပန်း​ရောင်​ခြယ်​​လေးက​တော့ ကျက်​သ​ရေရှိတဲ့ မဟာဆန်​ဆန်​အလှတရားကို ပိုင်​ဆိုင်​ထားတာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ လတ်​တ​လောမှာ​တော့ ပန်း​ရောင်​​လေးက မန္တ​လေးမှာ ကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့ Key To Success In Life Through Education” panel discussion ပွဲ​လေးကို မြန်​မာဆန်​လွန်းတဲ့
ဖက်ရှင် အလှအပ အကြံပြုချက် အနုပညာ ခေတ်ရေစီး
[Zawgyi] မိတ်ကပ်အမှား၂၉ချက်(၂) ၈။ မလိုအပ်သော အပြောက်အပြက်လေးများ အရောင်လက်စေတဲ့ အိုင်းရှဲဒိုးတွေက အရမ်းစွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်ခွံတစ်ခုလုံးပေါ်ကို သုံးလိုက်ရင်တော့ အရမ်းတောက်လွန်းပြီး ကြည့်မကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအိုင်းရှဲဒိုးမျိုးကို မျက်ခွံအပေါ်ယံလေးလောက်သာသုံးပြီး ကျန်တာကို သာမန်အိုင်းရှဲဒိုးနဲ့ဖြည့်သင့်ပါတယ်။ သင့်အသားအရေထက် ပိုမှိုင်းတဲ့အရောင်ဒါမှမဟုတ် သင့်အသားရောင် အတိုင်းသုံးတာပိုပြီးသင့်လျော်ပါတယ်။ ၉။ အိုင်းလိုင်နာအသုံးမှားခြင်း
[Zawgyi] မိတ်ကပ်အမှား၂၉ချက်(၁) မိန်းကလေးတစ်ယောက် မိတ်ကပ်မှန်အောင် သုံးတတ်ဖို့ စမ်းသပ်ပြုပြင်မှုတွေ အချိန်အများကြီး သုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မှန်ရှေ့မှာ အမျိုးမျိုးလုံးပန်းနေပေမဲ့လည်း စိတ်တိုင်းကိုမကျနိုင်သေးပါဘူး။ အင်တာနက် ပေါ်မှာကလည်း ဂျေလိုရဲ့ ကြေးနီရောင်ပါးပြင်တို့ ရီဟန်းနားရဲ့ Mulberry Obsession တို့လို အားကျစရာတွေ ကလည်း တစ်သီကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့
ဖက်ရှင် အလှအပ အကြံပြုချက်
October 12, 2018 by padaythar
[Zawgyi] ပွင့်လင်းရာသီကိုရောက်ရှိလာချိန်မှာ မိန်းကလေးတိုင်းဟာ ရုံးတက်၊ ကျောင်းတက်၊ ပွဲလမ်းသဘင်တွေအတွက် ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေ စီးဖို့ရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ ဒေါက့်မြင့်တွေဟာ ခြေထောက်တွေကိုနာကျင်စေပေမယ့် ဝတ်ဆင်သူကိုတော့ပိုစမတ်ကျစေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတဲ့အခါ နာကျင်မှုမရှိအောင် လိုက်နာသင့်တဲ့ နည်းလမ်းများကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အအေးခန်းမှာထားပါ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်တွေကို အအေးခန်းမှာ မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပါ။ အအေးခန်းမှာထား
၂၀၁၈ လက်သည်းခြေသည်း အလှဒီဇိုင်း၂၅မျိုး(၄)
[Zawgyi] Deep Blue Nail Art ဒါလေးကတော့ ပွဲတက်တွေမှာ ပိုလိုက်ဖက်အောင် ဆိုးလို့ရတဲ့ ဖန်စီဒီဇိုင်းလေးပါပဲ။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်လေး တွေလည်း တော်သင့်ရုံလောက်ပဲပါပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အရောင်နဲ့လည်း ဒီဇိုင်းဖော်နိုင်ပါတယ်။ အဆင့်ဆင့်ဖန်တီးပုံ ၁။ အပြာရောင် အပြိုးအပြက်အမှုန်ကလေးတွေပါတဲ့ ဆိုးဆေးကို လက်သည်းအောက်ဘက်မှာ ပုံထဲကအတိုင်းဆိုးပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ